History | JCB Myanmar
Japan Credit Bureau ဂျပန်အကြွေးဝယ်ကတ်ဗျူရို (JCB) ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်
အိုဆာကာ အကြွေးဝယ်ကတ်ဗျူရို (OCB) ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်
JCBကို ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နှစ်လကြာပြီးနောက် ISO အဆင့်သတ်မှတ်မူများနှင့်ကိုက်ညီသည့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးအကြွေးဝယ်ကတ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ မေလတွင် JCB သည် ဘဏ်မှ ငွေကို အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ထုတ်ပေးနိုင်သည့် အကြွေးဝယ်ကတ်ဘေလ်များကို Customer များအား ဝန်ဆောင်သည့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပထမဆုံးသော JCB အကြွေးဝယ်ကတ်
JCB နှင့် OCB ပူးပေါင်းခဲ့သည်
JCB ကတ်ကိုင်ဆောင်သူဦးရေ ၁ သန်းအထိရှိလာခဲ့ပါပြီ
နှစ်စဉ် ဂျပန်ယန်း ၁၀၀ ဘီလီယံကျော်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပါသည်
JCB ကုမ္ပဏီလီမိတက်အဖြစ် အမည်ပြောင်းခဲ့ပါသည်
အမှတ်စနစ်ပရိုဂရမ်ကို အကြွေးဝယ်ကတ်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်
JCB ၏ ပွဲဦးထွက် Joy Joy အမှတ်ချီးမြင့်သည့် အစီအစဉ်သည် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကတ်ပေးချေမှုအတွက် အမှတ်တစ်မှတ်ရပြီး ကတ်ဖြင့် ယန်း ၁၀,၀၀၀ သုံးစွဲပါကလည်းအမှတ်တစ်မှတ်ရပါမည်။ Customer များသည် ၎င်းတို့၏အကြွေးဝယ်ကတ်ဘီလ်တွင် ရိုက်နှိပ်ပေးသော အမှတ်များကို စုထားပြီး ဆိုနီ Walkman ကဲ့သို့သောမေတ္တာလက်ဆောင်များဖြင့် ပြန်လဲ၍ရပါသည်။
Joy Joy အမှတ်ဖြင့်ပေးသော မေတ္တာလက်ဆောင် ကြော်ငြာ
JCB အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို တိုကျိုတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
JCB အင်တာနေရှင်နယ် (အာရှ) ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို ဟောင်ကောင်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှုအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာသော JCB
နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ခရီးသွားလာသည့် ဂျပန်ခရီးသွားများလာသောကြောင့် ဂျပန်အကြွေးဝယ်ကတ်ကုမ္ပဏီများသည် မိမိတို့၏အမှတ်တံဆိပ်ကို နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် လက်ခံလာကြစေရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် အင်တာနေရှင်နယ်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် လက်တွဲပြီး ကတ်များကိုစတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ JCB သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးလက်သင့်ခံသော ဝန်ဆောင်မူကွန်ရက်ကို တည်ထောင်ရန် ပထမဆုံး ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သည့် တစ်ခုတည်းသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှု အမှတ်တံဆိပ် JCB သည် အမှတ်တံဆိပ်ကို လွတ်လပ်စွာ ဦးစားပေးဖော်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဤဆုံးဖြတ်ချက်မှ မီးရှူးသန့်စင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
1989 ဟောင်ကောင်ရှိ အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိေ သာ ဆိုင်များ၊ JCB ၏ပထမဆုံးနိုင်ငံရပ်ခြားကုန်သည်
JCB မှ ရွှေကတ်ကို စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်
Magnetic Stripe ပါသည့် ကတ်များကိုစတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်
ကတ်ထုတ်ဝေပိုင်ခွင့်ချပေးသည့် လုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ပါသည်
JCB ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ ၅ သန်းအထိရှိလာါသည်
နှစ်စဉ်ရောင်းချရသည့် တန်ဖိုးမှာ ဂျပန်ယန်း ၅၀၀ ဘီလီယံကျော်လာခဲ့သည်
ဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပတွင် ပထမဆုံး ထုတ်ပေးသည့် JCB ကတ်ကို ဟောင်ကောင်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်
နှစ်စဉ် ဂျပန်ယန်းငွေ ၁ ထရီလီယံကျော်ဖိုးရောင်းချခဲ့သည်
JCB ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ ၁၀ သန်းအထိရှိလာခဲ့သည်
JCB အင်တာနေရှင်နယ် အကြွေးဝယ်ကတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်
လက်မှတ်ထိုးပေးစရာ မလိုဘဲ လက်ခံနိုင်သော အစီအစဉ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးစတင်ခဲ့သည်
JCB အင်တာာနေရှင်နယ် (ဥရောပ)လီမိတက် ကို ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်
JCB ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းနှင့် ညစာစားခြင်း လက်မှတ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်
JCB ကတ်များကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်
JCB PLAZA ဝန်ဆောင်မူကို (ပဲရစ)တွင် စတင်ခဲ့သည်
JCB အင်တာနေရှင်နယ်(အီတလီ) S.p.A ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
JCB အင်တာနေရှင်နယ် (အိုရှင်းနီးယား)Pty လီမိတက်ကို သြစတေးလျနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်
JCB အင်တာနေရှင်နယ် (မိုက်ခရီုနီးရှား)လီမိတက်ကို ဂူအမ်နိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်
JCB ကတ်များကို ယူကေနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်
JCB အင်တာနေရှင်နယ် အာရှပစိဖိတ် ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကို စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်
JCB အင်တာနေရှင်နယ် (ထိုင်ဝမ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်
ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် JCB ကတ်များကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်
JCB ကတ်များကို ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်
JCB ကတ်များကို ဂျာမနီ၊ စင်ကာပူနှင့် သြစတေးလျနိုင်ငံများတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
JCB ကတ်များကို အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ဖိလင်ပိုင်နိုင်ငံတို့တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
JCB ကတ်များကို နယ်သာလန်၊ ဆွစ်ဇာလန်နှင့် စပိန်နိုင်ငံများတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပတွင် JCB ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ ၁ သန်းအထိရှိလာခဲ့သည်
ငွေပေးချေမှုအတွက် ကျေနပ်မှုမရှိပါက တိုင်ကြားရလွယ်စေသည့် J/Smart™ EMV အပလီကေးရှင်းကိုစတင်ခဲ့ပါသည်
JCB ကတ်များကို နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်
American Express နှင့် မိတ်ဘက်ပြုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်
JCB သည် ယူနီဗာဆယ် စတူဒီယို JAPAN ၏ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးမိတ်ဘက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
JCB ကတ်များကို မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်
J/Smart™ ကတ်ထုတ်ဝေမူကို စတင်ခဲ့သည်
JCB အင်တာနေရှင်နယ် (ထိုင်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်
Japan Point Anex Inc. ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်
EMVCo တွင် ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုကို လက်လွှဲယူခဲ့သည်
ငွေပေးချေသူမှန်မမှန် စစ်ဆေးသည့် J/Secure™ အစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
လက်ရောက်ပေးစရာမလိုဘဲ ငွေပေးချေနိုင်သည့် QUICPay™ ကို စတင်ခဲ့ပါသည်
JCB ကတ်များကို ဘာရိန်းနှင့် ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံများတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်
Citi Cards Japan, Inc.ကတ်ရယူသည့် လုပ်ငန်းကို Citi Cards Japan, Inc.နှင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
JTBနှင့် လက်တွဲပြီး J&J စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကော်ပိုးရေးရှင်း၊ JCB ခရီးသွားကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
Discover Financial Services နှင့် မိတ်ဘက်ပြုနိုင်ခြင်း
PCI လုံခြုံရေးစံချိန်စံညွှန်း ကောင်စီ၊ LLC ကို ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အခြားတံဆိပ် ၄ ခုနှင့်အတူ တည်ထောင်ခြင်း
JCB ၏ဂျပန်ရှိ အေတီအမ်ကတ်ကွန်ရက်တွင် UnionPay ကတ်သုံးစွဲမူကို တွင်ကျယ်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
JCB Emblem အသစ်ကို ကြေငြာခဲ့သည်
JCB က ယုံကြည်မှုနှင့် မျှော်လင့်မှုများကို ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်ခဲ့သည်
JCB ၏ ယခင် EmblemJCB ၏ Emblem သစ်
JCB Emblem တွင် ထောက်ခံမှု၊ အင်အား၊ မျှဝေခြင်းတို့ကို ကိုယ်စားပြုသော 'S' အက္ခရာကို ၃ ရောင်ခြယ်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားပါသည်။
JCB ၏လက်ရောက်ပေးစရာမလိုသော J/Speedy™ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်အား ပထမဆုံးအစွံထုတ်ခြင်း
J/Speedy (လက်ရှိ JCB လက်ရောက်ပေးစရာမလိုခြင်း)
JCB သည် အနီးဝန်းကျင်ဆက်သွယ်မှုအတွက် ကမ္ဘာ့စံချိန်စံညွှန်းမီ NFC နည်းပညာနှင့် EMV ချစ်ပ်နည်းပညာတို့ကို သုံးပြီး လက်ရောက်ပေးစရာမလိုသည့် J/Speedy ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်ခဲ့ပါသည်
JCB ကတ်ကို ယူအေအီးနိုင်ငံတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်
JCB ကတ် အင်တာနေရှင်နယ် (ကိုရီးယား) ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်
ဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပတွင် JCB ကတ်ကိုင်ဆောင်သူဦးရေ ၅ သန်းရှိလာသည်။
JCB အင်တာနေရှင်နယ် စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ (ရှန်ဟိုင်း) ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
JCB နိုင်ငံရပ်ခြားဝယ်ယူမှုများအား အကာအကွယ်ပေးရေး ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်ခဲ့သည်
ဂျပန်တွင် UnionPay နှင့် Merchant Acquiring လုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့သည်
JCB ၏ အနှစ် ၅၀ မြောက် နှစ်ပတ်လည်
PT. JCB အင်တာနေရှင်နယ် အင်ဒိုနီးရှားကို တည်ထောင်ခဲ့သည်
JCB ကတ်များကို ဗီယက်နမ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်
ဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပတွင် ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ ၁၀ သန်းအထိရှိလာသည်
JCB International do Brasil Representação Comercial Ltda.(current JCB International do Brasil Administradora de Cartões de Pagamento Ltda.) ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်
ဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပတွင် ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ 15 သန်းအထိရှိလာသည်
JCB အင်တာနေရှင်နယ် (ဥရောပအာရှ) LLC ကို ရုရှားတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်
JCB Tottori နည်းလမ်းစင်တာ (JCB EQSe ကုမ္ပဏီလီမိတက်) ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်
JCB ကတ်ကို လာအိုနိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်
JCB ကတ်ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်
JCB ကတ်ကို သြစတြီးယားနိုင်ငံတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်
JCB ကတ်ကို ရုရှားနိုင်ငံတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်
ဂျပန်ပြင်ပတွင် ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ သန်း ၂၀ ကျော်လာခဲ့သည်။
ကျိုတို JCB PLAZA ဖွင့်ခဲ့သည်
ကျိုတို JCB PLAZA
ကျိုတို JCB PLAZA သည်ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အလုံးအရင်းဖြင့် ရောက်လာသည့် ခရီးသွားဧည့်သည်များအား JCB ၏ပြိုင်စံကင်း ဧည့်ဝန်ကျေပွန်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ကျိုတိုဘူတာတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက် JCB PLAZA ဖြစ်သည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စာသားအဖြစ် "သင့်အတွက် ပြိုင်စံကင်းဖြစ်သွားစေရမည်" ကို ကြေညာခဲ့သည်
JCB ကတ်ကို ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်
JCB ကတ်များကို ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်
JCB ကတ်များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်
JCB ကတ်များကို ဂျာမနီတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်
အိနိယတွင် JCB ကတ် အင်တာနေရှင်နယ် (အာရှတောင်ပိုင်း (SOUTHASIA) Pte. ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်
JCB ကတ်များကို ဘရာဇီးတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်
JCB ကတ်များကို ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်